स्टीममा कसरी खेल फिर्ता गर्ने? (अनुरोध गर्न निर्देशन) - गेमि।
के तपाईं स्टीममा खेल फिर्ताको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ?ठीक छ, हामी तपाईंको फिर्ता मिल्यो!एक खेल डाउनलोड गरियो जसको कभर राम्रो देखिएको थियो तर केहि आशा गरेको जस्तो देखिनुभयो?त्यसोभए चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईं स्टीममा खेल फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एक विस्तृत पोष्ट तयार गरेका छौं जुन स्टीममा फिर्ती प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक सबै कुरालाई कभर गरिएको छ।
यस गाईडले स्टीममा रिफन्ड, स्टीममा फिर्ताको लागि योग्यता, र तपाईंलाई सहयोग गर्नको लागि केहि बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू समावेश गर्दछ।यसैले यस पोष्टलाई स्टीम रिफन्डको बारेमा सबै कुरा जान्न पढ्न दिनुहोस्।
तपाईको स्टीमको साथ समस्याहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ? जाँच गर्नुहोस् स्टीम काम गरिरहेको छैन गाईड।
स्टीममा खेल फिर्ता गर्नका लागि चरणहरू:
तपाइँको खेल को लागी एक फिर्ती प्राप्त गर्न धेरै सरल छ र एक परेशानी-मुक्त कार्य यदि तपाइँ हामीसँगै अनुसरण गर्नुहुन्छ भने। हामीले प्रत्येक चरण विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छौं ताकि तपाईले स्टीममा सजिलै फिर्ती पाउन सकौं। यहाँ चरणहरू छन् जहाँबाट तपाईं फिर्ती प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
क्लिक गरेर स्टीम सुरुवात गर्नुहोस् यहाँ । यो स्टीमको लागि समर्थन साइट हो जहाँ तपाईं आफ्नो खाताको बारेमा चयन गर्न धेरै विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ।
एक पटक तपाईले स्टीम समर्थन सुरु गरेपछि, तपाईको स्टीम खातामा साईन ईन गर्नुहोस्।
लग ईन गरेपछि, तपाईंलाई तपाईंको खाता सेटिंग्समा लगिनेछ। 'खरीद' ट्याबमा छनौट गर्नुहोस्, जुन तपाईंलाई आफूले खरीद गरेको खरीदमा लैजान्छ।
अब, तपाईंसँग खेलहरू खरीद गर्ने सूची छ। अब तपाईं फिर्ती फिर्ता शुरू गर्न चाहानुभएको खेल चयन गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईले खेल चयन गर्नुभयो, स्टीमले तपाईंलाई किन फिर्ता फिर्ता चाहिन्छ भनेर सोध्यो। तपाईले दुई सूचीबाट कुनै एउटा कारण चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
अब, स्टीमले तपाईंलाई सोध्नेछ कि तपाईं फिर्ती चाहानुहुन्छ वा टेक्निकल मुद्दा फिक्स गर्नुहोस्। तपाईंले फिर्ती को विकल्प छान्नु पर्छ। अब तपाईंलाई फिर्ती पृष्ठमा लगिनेछ जहाँ तपाईं फिर्ती फाराम भर्न सक्नुहुनेछ।
यस पृष्ठमा, तपाईं चयन गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं फिर्ती चाहानुहुन्छ यदि तपाईं आफ्नो बैंक खातामा वा स्टीम वालेटमा फिर्ती चाहनुहुन्छ भने। स्टीमले तपाईंलाई भुक्तान विकल्पहरूको लागि कभर गर्यो। तपाईं भुक्तानी विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ र 'अनुरोध सबमिट गर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईंको स्क्रीनको तल-बाँया कुनामा अवस्थित छ।
सफलतापूर्वक यी सबै चरणहरूको सावधानीपूर्वक अनुसरण पछि, तपाईं अस्वीकृत हुनुभएको बिना तपाईंको खेलको फिर्ती प्राप्त गर्नुहुनेछ।
स्टीम रिफन्ड अस्वीकृतिबाट बच्नुहोस् - फिर्तीको लागि योग्यता
त्यहाँ केहि नियमहरू छन् जुन तपाईं फिर्ती प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले फिर्ता रकम फिर्ताको लागि आवेदन दिनु अघि यी नियमहरूको ख्याल राख्नु आवश्यक छ ताकि तपाईं स्टीम गेम रिफन्डबाट अस्वीकृत हुनुहुनेछ। यहाँ केहि सर्तहरू छन् जुन स्टीमले फिर्ती फिर्ता लिनु पर्छ।
फिर्ती फिर्ता शुरू र स्वीकार गरिनेछ यदि खेल फिर्ता गरीएको छ र खेल खरीद को १ 14 दिन भित्र फिर्ता गरियो।
यदि तपाईं १२० मिनेट भन्दा कमको लागि खेल खेल्नुभयो भने मात्र खेल फिर्ता हुनेछ। यदि गेमप्ले १२१ मिनेटमा पनि स्पाइक गर्दछ भने, तपाईं फिर्ताको लागि अस्वीकृत हुनुहुनेछ।
स्टीमको फिर्ताको लागि सर्तहरू धेरै कडा हुन्छन्, र ती नियमहरू प्रत्येक चोटि पालना गर्दछन्। त्यसोभए तपाईंले फिर्ताको लागि अनुरोध गर्नु अघि यी चीजहरूलाई विचार गर्नुहोस्।
१ क्यू स्टीम रिफन्ड कति समय लाग्छ?
बर्ष:तपाईंको स्टीम रकम फिर्ता स्वीकार गरेपछि, फिर्ती केवल २- hours घण्टा लाग्छ। यदि तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थानान्तरणको लागि रोज्नु भएको छ भने, यो 5-- 5- कार्य दिनहरू लिन सक्दछ।
२Q स्टीममा फिर्ताको लागि कति सीमा छ?
बर्ष:कुनै स्टीमले कुनै प्रयोगकर्ताले सुरु गरेको फिर्तीको स mentioning्ख्या उल्लेख गर्दै कुनै सीमा तोकेको छैन। तर यदि तपाइँ तपाइँले खरीद गर्नुहुने प्रत्येक खेल फिर्ताको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, तब स्टीमले तपाईंलाई अस्थायी रूपमा रिफन्डबाट रोक्न सक्छ।
3Q। २०१२ मा स्टीममा के आउँदैछ भनेर के नयाँ शीर्षकहरू छन्?
बर्ष:अर्को गेन कन्सोल जुन गेमि changed परिवर्तन भएको छ साथ, खेल पनि बजार मा मजबूत खडा गर्न विकसित भएको छ। यहाँ शीर्ष games खेलहरू छन् जुन २०२१ मा आउँदैछ:
दुष्ट जीनियस २।
हामी आशावादी छौं कि हाम्रो पोष्टले तपाईंको उद्देश्य पूरा गर्‍यो र तपाईंलाई खेल फिर्ती प्राप्त गर्न मद्दत गर्‍यो। यदि तपाईंसँग स्टीम जीएएम रिफन्डको बारेमा कुनै विचार वा प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं यसलाई तल टिप्पणी बाकसमा छोड्न सक्नुहुन्छ।
डाउनलोड नगरीकन पूर्ण पूर्ण टिभी एपिसोडहरू हेर्नुहोस्
एमपी3मा युट्यूब गीत डाउनलोड गर्नुहोस्
नि: शुल्क चलचित्र हेर्न वेबसाइटका नामहरू
के तपाई पीसीमा किक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ क्राइजलिस्ट जस्तो साइट छ
तपाइँ ईन्स्ट्राम पीसी मा dm गर्न सक्नुहुन्छ